Maxaa ku dhacaya sanadada 40? - Gofumed
Maxaa ku dhacaya sanadaha 40?
Luulyo, 2012 Leisure / waxyi, safarka
Waqtigaan ka hor ayaan qoray maqaal ku saabsan dareenka xoriyada, mid ka mid ah kuwa bilaha ah. Qodobka aan runtii ku raaxaysto akhrinta, maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inay tahay mid ka mid ah kuwa ay xoojinayaan waqtigan xaadirka ah. Sawirka aan dhiganaa waxay la mid tahay tan, inkastoo wakhtigu uusan ahayn mid isku mid ah.
Laakiin guud ahaan, sawirka qaaday at safar ugu dambeeyay ee qoyska waxay keentaa in ay ka fikiraan markii ugu markii wadada ka dhigaysa waddadiisa oo ay ina siinaysaa waqti inay dib u eegaan nolosheena. In maalmihii la soo dhaafay, saaxiib iga dhigtay arag inay tahay wax caadi ah, waxa dhacaya marka aad hesho si aad afartan safarka Wakhtigan oo kale ayaan sameeyey xiriirka yar, sababtoo ah su'aasha iyo haddii ay jirto wax sabab lagu hafray. Sidaas darteed, waxaan dhihi karaa, ma jiraan wax isbedel ah.
Waxaan weli dareemeynaa isla muraayadda, muraayada aan isku aragno, waxaan iska casilay xanuun badan oo aan ku dhufano, ma ahan inaan taageerno labo ciyaarood oo isku xigta, lakiin guud ahaan jimicsiga iyo hamigooda waa isku mid.
Maxaa isbeddelay waa macnaha guud, wiilashu way korayaan oo waxay galayaan marxaladan oo ay dalbanayaan waqti dheeraad ah -oo tayo badan leh-, oo leh wacyi galin badan. Sidaa daraadeed mudnaanta ayaa ah isbedelka nolosha, inta udhaxeysa sannadihii 25 ee la rumaysan yahay xoriyad iyo waxa ugu dambeyntii uu ku qanco wakhti xorta ah. Sidoo kale kuwa kale ma nagu arkayaan isku mid, mana aha dhadhan.
Nolosha qof walba uu noqon doono kala duwan, iyo bulshada laftiisa ina siinayaa fikrado qaar ka mid ah waa waxa wakiil guusha, qanacsanaanta, farxad, firaaqada, waxyoonay, nolosha qoyska. Under fikirka this kala duwan ka dhigaysa 21,600 ilbiriqsi kasta oo dherer ah macnaha waa ka duwan yahay. Sidaas qaar ka mid ah u-eegida waxaa loo habeeyey oo kaliya in macnaha a classic Latin American, kala duwanaansho badan ama ka yar haddii aan ka mid ah isbedel reer loolka kor North 40 ah.
Guud ahaan waxa aan isbeddelin waa in si tartiib tartiib ah, oo u dhexeeya 30 iyo 40 sano ee aannu ogaanno bilaabmaa in ay diiradda saaraan koritaanka carruurta our (ama adeerka kuwa aan samayn). Tani waxay ku xirantahay guurka goor dambe, ama kuwa horey u soo gaaray. Our fasalka college hore ama maraan wax la mid ah, waayo-aragnimo ah helay iyo guulaha ka dhigaysa noo illowdaa Cawaysimina idinkoo looltan waxbarasho ama qaan. Ka dibna waxaan ku heshiinney inaan xusuusano sanadahaas oo aan ku faraxsanahay in aan aragno in carruurtoodu koreyso.
Kuwa soo socda waxay bilaabaan inay keligood dareemaan sababtoo ah caruurtoodu jaamacad ayay u socdaan oo ay dib ugu noqdaan jiilkooda; kuwa aan haysanin waxay bilaabaan inay dareemaan isku dar ah «Anigu ma tagin»Iyadoo«waa inaan»Oo waxay raadinayaan macnaha iyaga oo leh jiil da'yar oo raaxaysanaya waqtiga firaaqada iyo akadeemiyada xad-dhaafka ah inta ay heystaan ​​wakhti ay kaga fikiraan qoyska.
Sidaas daraadeed, guud ahaan marka aan gaarno da'da afartan, xiisaha caruurteena si ay ugu sii socdaan wakhti yar marka loo eego kuwa aan dhex marno waxay noqoneysaa mid xooggan. Inkastoo ay iskuulka ku jireen wax yar ayaan nagu welwelnay sababtoo ah gardarradooda aan waligood aheyn mid aan dhib lahayn, marnaba ma shaki galin in aan nahay geesiyaal aan caqli gal ahayn, marnaba waxay leeyihiin dhibaatooyin isdaba-joog ah oo gaadhay xag jir. Sidoo kale gabadha la socotay sanadahaan waxay farxad u leedahay, -haddii la sii wadi karo illaa iyo waqtigaas-. Taas oo isku darka ah ee xiisaha leh, noloshada ku noolaanaya ama dareemaya madaxa ama kala furfuran danaha qoyska.
Sidaa daraadeed, halkan waa qaar ka mid ah fikradahayga safarkii ugu dambeeyey ee ku saabsan macnaha guud ee xayawaanka.
Iyada oo arrintani leedahay, waxaan dib u bilawnay fasallada xisaabta. Hadda wax badan oo aljebra ah ayaa soo fiicnaaday iyo in ay aragtay in aysan ka mid ahayn adduunka kale, laakiin waxay ku jirtaa inay ku shaqeyso dhammaan hagaha wakhtiga.
Tani waxay ahayd waayo-aragnimo xiiso leh tan iyo markii ay qaadatay wakhti ay ku qanciso inuu ku fiican yahay xisaabta laakiin taasi kuma filna. Sannadkii hore waxa uu aaminsan yahay in uu ahaa mid khayaali ah, in ka badan aniga ama macalimiintiisa.
Ugu dambeyntii, waan ku faraxsanahay in aan ogaado haddii aad go'aansato injineernimada nidaamka, waxaad awoodi doontaa inaad ka gudubto heerka adag ee xisaabta. Inkastoo aan dhadhamo waxaan noqon lahaa mid cajiib leh suuq-geynta iyo xayeeysiinta ... taas ayaa go'aan ka gaari doonta isaga.
Shaki kuma jiro waxa ay noqon doontaa gabayaa farsamada, taas oo bilaabay fasalka saddexaad la blog a waalan oo u hadla wax xataa Waxaan fahamsanahay laakiin aad ogtahay ayaa ka caawiyay diyaarin fikradaha iyo qoraal la caddeeyo wanaagsan.
Iyadoo ay wax ka duwan tahay. Mararka qaarkood waxaa lagama maarmaan ah in la joojiyo sababta oo ah waxay dhaxashay caadadeydii xuneyd ee u dhiganta maskaxda.
Laakiin sidoo kale waxay halis u tahay in la qiyaaso waxa aan mustaqbalka wax ka baran lahaa.
Saxafi sharaf leh, awooddiisa inuu qoro. Naqshadeyaal iyada ah oo ay la socoto gacmaheeda, sawir iyo faahfaahin.
Hadda waxay tiraahdaa waxay noqon doontaa macallin ... hubaal waxay ku jiri doontaa takhasuskeeda.
Sawirka, oo leh kharashka caadiga ah ee maalinta Hindi, maalmahaas oo keliya ee UTM ee isku-duwaha ee magangelyo.
Wuxuu si dhab ah u siin lahaa wax kasta oo raacaya iyada oo adigoo dhoola cadeynaya.
Safarka ugu dambeeya waxaan u fuulnay dhinaca sare ee dhoobada, oo leh carrabka dabaq. Hoos waxaa ku yaal guryaha oo loo arko sida qaybo kala duwan, oo ah asal ahaan buuraha buuraha Puca Opalaca.
Wiilkaygu si dhib leh ayuu hoos u dhacay oo wuxuu isku tuuray sidii Iana ah dhagaxyada qaarkood oo aanan sharxi karin sida ay u heli karaan.
Muuqaal cajiib ah!
Dabadeedna gabadhayguna waxay doorbidaan inay ku dhuftaan Inkasta oo aan ku daalaneynay jidka oo ina keenay qatarta.
Gacalisada ayaa i xasuusineysa gabadha indhahayga u iftiimeysa. Iyadoo timaha wejiga wajigiisa, iyada oo awood u leh inay iga dhigto inaan u maleynayo inaad jacayl ka badan karto deynta.
Sidaa daraadeed, waa dadkeennu, sidaas oo kale way ka duwan yihiin.
Mararka qaar waa adag tahay in lagu fekero in tani ay tahay mid ka kid yar kan waa inay qaataan maalinta saddexaad nolosha waagii beryayay ay rumaysnayn inuu dhiig xuddunta ...
... wakhtigu wuu baasaa oo maaha dhadhan.
Waxaan xasuustaa in aan khibradeyda aan u maleynayay in dhiigga xinjirta ah ee xuddunta aanan weli bilaabin uu ahaa dhiig cusub. Markii aan u tagnay isbitaalka, dhakhtarku wuxuu u soo jiiday sida geedka oo uu ku nadiifiyay geedkii.
Waxaan u Dirray canaan wanaagsan sababta la inoo helitaanka cummerbund ah, qadaadiic ah 5 senti iyo gacmo gashi in aan nuugi gacmaha.
Ahhh sida aynu oon waxba u ahayn.
Beerta xadiiqada, sawirro xiiso leh ayaa ku qurxin geedka hareeraha Ceiba, kaas oo lagu beeray Mudane Bonifacio Gómez sannadkii 1932.
Magaalada waxaa la aasaasay bishii 1887 sida San Juan de Buena Vista in kastoo uu loo yaqaan San Juan del Caite, oo magiciisa ku yimaado ka dhaxalka qadiimiga ah ee maqaar curtimbre ah.
Inkasta oo magaciisa rasmiga ah uu ahaa Malutena macnihiisu yahay Flat Earths, sababtoo ah waxay ku taallaa duleedka.
Markaasaannu ku dhex jiifsanay cawska, oo waxaannu aragnaa laamihii hoostiisa, sida caqli oo kale. Ja. Ilaa qaniinyada kaneecada sameeyey cararno xusuusto sheekada jir ah oo meeshan lahaa faafa badan oo cudurkii Zancudo, halkaas oo dadku ay cudurka duumada iyo maqnaanshaha dhakhaatiirta oo keliya xididdada iyo caleemo daaweyn
Markaas ayaannu u soconay webiga, oo ahaa wax yar.
Halkan waxaan ku yeeran legend hore ayaa sheegay in magaalada oo intaasu waxay ahayd mar u gudubno, a, kaliya u eg roob helo in condice wadada si Erandique si ay u arkaan waxa ay u eg biyo dhulka ka soo bixiyey iyo ma dhici samada ka.
Waxaa suurtogal ah inay noqon doonto waqtiga kaliya ee aan tagno meeshan. Laakin hubi in caruurtaan marka ayan wali ixtiraamin.
Magaalada ayaan cunnay maraq digaag leh, oo leh hargab doofaaro ah, sababtoo ah saameynta El Salvador ee degaanka waa mid aad u xoog badan.
Waxay si fiican u sameeyeen, waxay ku shubaan liin yar iyo milix ... waa daweyn.
Waqtiga dhabta ah isbedel. Waxaan baraneynaa inaan ku raaxeysto daqiiqado yar, oo ay ku jiraan mashiinka qaxwada oo si fiican u leh sida magaalo yar. Ma aha sababtoo ah waan isbeddelay, laakiin sababtoo ah macnaha aynu jecelahay wuu baddalay.
Jidka dib u soo noqoshada, waxaan sawirkan ka qaadnay dooxada Otoro, oo eegaya aagga aan ka soo jeednay.
Maxaa ku dhacaya 40?
Waxba ma jiraan.
Laakiin qodobkan ayaan ku xisaabin lahayn habkaas 15 sano ka hor.
Post Previous«Previous Raajo degdeg ah ee Geofumadas in ka badan bilaha 75
Post Next Dabcan ArcGIS codsatay in Exploration Macdanta ahNext »